Ususe ngephutha amafayela - kunalokho njalo iphutha computer yomsebenzisi. Cindezela bese kuyodingeka "susa" esikhundleni "ikhophi", ulahlekile igundane, chofoza into eseduze noma susa lonke ifolda, okuyinto ngaphezu amafayela ubudala - kungcono ukuthi elula. Kunzima kakhulu ukuba alulame Imininingwane elahlekile. Nokho, ngisho abasebenzisi abangenalwazi ukwazi ukuthi inqola yokuthenga Ngo-Windows - kuyindlela elula ukuze siphinde sithole elahlekile idatha digital wubudedengu. Kuyini lokhu ithuluzi eliwusizo?
amafayela kuphi asusiwe
Lapho hard drive, flash drive noma abanye bezindaba Idatha elondoloziwe, hlala PC eyabelwe indawo futhi musa zinyamalale nje akuzona phezu neminye imininingwane kuzoqoshwa. Susa ifayela, asiziphuci ke. Vele indawo ukuthi ithatha, computer manje kubhekwe mahhala futhi ingasetshenziswa ukurekhoda nenye idatha.
Ngakho, amafayela kusulwe ngezinye izikhathi ukutholakala. amafayela Ngisho usanda kusula ngemva yokutakula kungenzeka lilimele - uma kwenzeka ukuthi ingxenye kubhalwa phezu kwayo noma ngeke ibuyiselwe uma endaweni yakhe ngokugcwele elalihlala idatha entsha. ukususwa Ngakho ngephutha idatha - inkinga enkulu kokubili abasebenzisi abayitoho futhi abalawuli zekhompyutha izinhlangano.
Kuziwa kubhasikidi wokutakula
I Onjiniyela kuMicrosoft bathole ngempela isixazululo wekugcina le nkinga: esikhundleni ngokususa amafayela sinyathelo ukuba wakhe ifolda ekhethekile okuthiwa Recycle bin isiqondisi (e ukuhunyushwa Russian - kubhasikidi). Ngo-Windows, kungcono nje ifolda ezifihliwe, etholakala impande drive ngamunye.
Ukuze usuke imibhalo asusiwe kubhasikidi, singazi ngisho kudingeka afune ifolda ezifanele - esikhundleni kungcono ukusebenzisa ithuluzi of the gama elifanayo kudeskithophu. Chofoza isithonjana nge isithombe kudoti ungakwazi, siyakwazi ukusondela amafayela akude kuwo wonke amadiski ngesikhathi esisodwa. Esikhathini File Explorer, ungakwazi ukuhlunga by date noma susa ifolda yasekuqaleni, ukuchitha, kodwa into esemqoka - ukubuyisela. Yokutakula wenziwa indawo kusuka lapho idatha isusiwe.
Udoti futhi khulula isikhala sediski
Iqiniso lokuthi kuphela okwenziwa "susa" amafayela umyalo kudoti, okuhle nje kanzima sediski iyatholakala. Kodwa lapho isikhala uthotshiselwa, isikhathi kuziwa ukususwa sokugcina idatha.
Ukuze ugweme ukugcwaliswa lishesha kakhulu we hard drive, umsebenzisi angakwazi Ukusetha usayizi esiphezulu ukuthi esiyoba kubhasikidi. Ngo-Windows, ukubaluleka okuzenzakalelayo 5-10 amaphesenti usayizi esigabeni ngasinye. Lapho kubhasikidi ugcwele, ngokuphambene kuzosuswa labo amafayela eziye ibekwe kuwo phambi kwabanye.
Ukuze iskhala kwi-hard drive yakho, ungakwazi ngesandla ukususa amafayela kusuka Recycle Bin ezingadingekile. Ungase futhi athululele kudoti usebenzisa ngokuphelele kwimenyu yokuqukethwe ukuthi luvela kwideskithophu uma chofoza ngakwesokudla ukunqamulela yayo. Kodwa ngaphandle ebuka kokukhipha wonke amafayela, kukhona ubungozi bokulahlekelwa idatha elungile, futhi eqinisweni ubhasikidi Windows futhi kufanele kuvinjelwe.
ukususa amafayela unomphela, ngokudlula bin recycle
Uma une isikhala okuncane kakhulu disk futhi uqiniseka kakhulu wena, ungase uvimbele ngokuphelele kubhasikidi. Ukuze wenze lokhu nge kwimenyu yokuqukethwe isithonjana kudeskithophu, iya impahla yayo, ukuhlonza izingxenye esingajulisa ufuna ukususa amafayela unomphela, bese ukhetha "Sula amafayela ngokushesha ngemuva ukususwa, hhayi ngokubeka ngeqoma." Imiphumela kungadabukisa kakhulu, ngakho zixwayisa kakhulu ukuthi ngokumelene nalo. Ikakhulukazi ukuthi kukhona bazindla amafayela ngabanye ukuze kwakungelona bin recycle. Susa i-Windows abangakwenza uma ucindezela u-Shift + Susa.
Ngaphezu kwalokho, kufanele sikhumbule ukuthi kubhasikidi ayidaliwe futhi amafayela njalo unaphakade kuyo abezindaba esikhiphekayo, ezifana flash oshayelayo. Ngaphezu kwalokho, ukususa unaphakade ifayela, usayizi waso kosayizi oyisilinganiso esiphezulu bekisa Recycle Bin kulesi sigaba.
Ukuthenga e-Windows 7: izimfihlo ukuhleleka okuhle
Iningi izilungiselelo kubhasikidi lungatholakala nge isithonjana imenyu yengqikithi kudeskithophu.
Ngakho, khetha "Properties" kumenyu kuvula ibhokisi lengxoxo ukuthi ubala zonke izihloko ezitholakalayo ohlelweni. Ukuze ngamunye wabo, ungakhetha Usayizi wokugcina amafayela kusulwe kwi-Recycle Bin noma ukulishiya ngokuphelele ukusetshenziswa kwalo.
Uma ususa umkhaza ebhokisini "Cela isiqinisekiso ukususwa", ke ngeke usaba ukuvela isixwayiso ajwayelekile, "Ingabe ngempela ufuna ukususa ifayela?". Uma uchofoza "Susa" noma "Susa" amafayela ukhiye uzobe ngokushesha ibekwe kubhasikidi noma ukususwa unaphakade uma ingasebenzi zokugcina. Lokhu kulungiselela kusebenza kuwo wonke izingxenye.
Indlela ukufihla nendlela ukubuyisela Recycle Bin isithonjana kudeskithophu
Abanye abasebenzisi ufuna akazange izinqamuleli kudeskithophu. Ngo-Windows 7, ukususa inqola yokuthenga desktop ngeke kube nzima. Vele uchofoze itafula ilungelo inkinobho yegundane ohlwini evelayo, khetha "Ukwenza okuthandwa nguwe" bese "Shintsha imifanekiso ideskithophu". Lapha ungahloli eduze ngokwanele zalezo zinto, izinqamuleli lapho ungafuni ukubona. Ungakwazi futhi ukushintsha isithonjana, ukhethe okukodwa ejwayelekile noma uwedwa.
Sicela wazi ukuthi ukusula isithonjana akuphazamisi ukusebenza kwe-obhasikidi kakhulu. amafayela ezisusiwe namanje agcinwe lapho. Ukufinyelela amafayela akude lungatholakala ngokungena kwi-desktop nge Windows Explorer.
Uma ususa isithonjana ngendlela echazwe ngenhla, niyazi, futhi kanjani ukubuyisela kubhasikidi Windows 7 - kwanele ivuselele ngaphambili isuswe umkhaza. Okubi uma ilebula lihlotshaniswa ukunyamalala igciwane noma ukuhlela abanganaki ebhukwini. Khona-ke indlela echazwe singakusizi.
abasebenzisi abanolwazi nge umqondisi kungenziwa ikhuthazwe ukuthi isebenzise ebhukwini umhleli noma umhleli-Group Policy. Kulabo abangenawo amalungelo wokuqondisa noma esatshwe izenzo zabo ezibangela umonakalo ohlelweni, kungashiwo Kunconywa ukwenza ukululama uhlelo: isenzo ngokuvamile iphephile futhi isebenza ngempumelelo kakhulu.
Uyini Control Panel: ulwazi olubalulekile
Uma kumafolda babe izinqamuleli
Mark Fisher. Incwadi ethi "Imfihlo Millionaire"
Indlela yokwenza sleeves lephepha ngemininingwane
Jeep Grand Cherokee - ngumngane adventure
Kailas Jeevan: yokusetshenziswa, incazelo kanye izakhiwo